Fashil:Hodan Cabdiraxman oo qeylo afka furatay kadib cod sir ah oo loo soo diray. - xog baahiye
Hodan Cabdiraxman oo horay ugu guuleysatay inay hantido qalbiga Mursal muse, ayaa muuqaal ay barteeda snapchat soo gelisay ku shaacisay inay aad uga xuntahay, in hablaha qaar ay isku howlaan helidda qalbi horay loo kasbaday. waxeey si toos ah ugu digtay hablo weeydiiyay su’aalo quseeya seygeeda, Mursal muse.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo xaqiijiyay, in Hodan loo soo diray codad muujinaya in seygeeda uu xiriiro kala duwan la leeyahay hablo ku nool magaalada minneapolis ee dalka Mareykanka.inkastoo aysan muuqaalkeeda ku shaacin hablaha weerarka ku haya seygeeda,hodan ayaa aad ugu andacootay in aysan marnaba oggolaan doonin in la baabi’iyo qoyskeeda.
AKHRISO: Deg deg: Axmed Rashid oo xabsiga loo taxaabay maxkamadna la saari doono iyo ilkacase qays oo Sharma boy garab siiyay
Dhanka kale, xogo hoose ayaa waxaan ku ogaannay in Mursal Muuse uu qorsheynayo in uu soo qaado hees cusub oo uu ku amaanayo xaaskiisa,Hodan Cabdiraxmaan.
Dad badan ayaa u arka in Mursal uu doonayo in uu si maskaxeysan u daboolo xiriirrada hoose uula wado hablaha kale.
halkan hoose ka daawo muuqaalka hodan Cabdiraxman.
AKHRISO: Fashil:Farxiyo kabayare oo weerar culus ku qaadday Fiska,una hiilisay Rasmi.